အရာရှိ( ငြိမ်း)တစ်ဦးရဲ့သမီးဖြစ်ပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် အရေးယူခံရဖွယ်ရှိနေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည် – Cele Oscar
အရာရှိ( ငြိမ်း)တစ်ဦးရဲ့သမီးဖြစ်ပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် အရေးယူခံရဖွယ်ရှိနေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
April 11, 2021 By L YC Knowledge
ပရိသတ်ကြီး ရေ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် ကို တော့ အားလုံး သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ ဒီနေ့ ဒီချိန် အထိ အနုပညာ လမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင် မှုတွေ ရပ်တည် နေခဲ့ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေပါ ပိုင်ဆိုင် နေတဲ့ မင်းသမီး တစ်လက်ပါပဲနော်။ မင်းသမီး တစ်ယောက် အနေ နဲ့ အေးဆေး နေနိုင် ပေမယ့်လည်း ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မကြား မှာ ဓမ္မ ဘက်ကနေ အခိုင် အမာ ရပ်တည်ခဲ့ သူ ပါပဲနော်။
သူမရဲ့ ဖခင်မှာ စစ်တပ်မှ အရာရှိ အငြိမ်းစား တစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း နွေဦး တော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ပါဝင်ခဲ့ တာကြောင့် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရဖွယ် ရှိနေတဲ့ အပြင် သူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ကိုပါ နိုင်ငံတော်ပိုင် အဖြစ် သိမ်းဆည်း ခံရဖွယ် ရှိနေ တယ်လို့ လူမှုကွန် ယက်တွင် သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့နေ တာပါနော်။ ” ဘယ်လို တွေတောင်လဲ ဟယ်!!
ယုတ်မာ လိုက်ကြတာ..👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် ….ခိုင်သင်းကြည် ၏ …. အမျိုးသား …. ခန့်နိုင် …. ခိုင်သင်းကြည် ၏ …. သမီးဖြစ်သူ ….. စံထိပ်ထားဦး …..၎င်းတို့ ၃ ဦးသည် …. CDM ပြုလုပ်ရန် …. လှုံ့ဆော်ခြင်း …. CRPH အားထောက်ခံခြင်း ….ဆူပူအုံကြွမှုများ ဖြစ်ရန် ….အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ရန် …. လှုံဆော်ခြင်း … နိုင်ငံတော် ….အကြီးအကဲများအား …. စော်ကား …..ပုတ်ခတ်ခြင်း ….. တို့ကြောင့် …..၎င်းတို့ ၃ ဦးအား …. ဥပဒေအရ ….ထိရောက်စွာ …. အရေးယူသွားမည် ….. ယင်းအပြင် …. မိသားစုပိုင် …. စီးပွားရေး … လုပ်ငန်းများအား ….နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် …. ချိတ်ပိတ် ….သိမ်းဆည်း …. သွားမည် …. ” လို့ Facebook ပေါ်တွင် ရေးသားတာ မြင်တွေ့ နေရပေမယ့် အတည်ပြု လို့တော့ မရသေးပါဘူး ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတျကွီး ရေ သရုပျဆောငျ ခိုငျသငျးကွညျ ကို တော့ အားလုံး သိကွမယျ ထငျပါ တယျနျော။ ဒီနေ့ ဒီခြိနျ အထိ အနုပညာ လမျးကွောငျးမှာ အောငျမွငျ မှုတှေ ရပျတညျ နခေဲ့ပွီး စီးပှားရေး လုပျငနျး တှပေါ ပိုငျဆိုငျ နတေဲ့ မငျးသမီး တဈလကျပါပဲနျော။ မငျးသမီး တဈယောကျ အနေ နဲ့ အေးဆေး နနေိုငျ ပမေယျ့လညျး ဓမ်မနဲ့ အဓမ်မကွား မှာ ဓမ်မ ဘကျကနေ အခိုငျ အမာ ရပျတညျခဲ့ သူ ပါပဲနျော။
သူမရဲ့ ဖခငျမှာ စဈတပျမှ အရာရှိ အငွိမျးစား တဈဦး ဖွဈပမေယျ့လညျး နှဦေး တျောလှနျရေးမှာ ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ ပါဝငျခဲ့ တာကွောငျ့ ဥပဒအေရ အရေးယူခံရဖှယျ ရှိနတေဲ့ အပွငျ သူတို့ ပိုငျဆိုငျတဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှေ ကိုပါ နိုငျငံတျောပိုငျ အဖွဈ သိမျးဆညျး ခံရဖှယျ ရှိနေ တယျလို့ လူမှုကှနျ ယကျတှငျ သတငျးတှေ ပြံ့နှံ့နေ တာပါနျော။ ” ဘယျလို တှတေောငျလဲ ဟယျ!!
ယုတျမာ လိုကျကွတာ..👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 သရုပျဆောငျ ခိုငျသငျးကွညျ ….ခိုငျသငျးကွညျ ၏ …. အမြိုးသား …. ခနျ့နိုငျ …. ခိုငျသငျးကွညျ ၏ …. သမီးဖွဈသူ ….. စံထိပျထားဦး …..၎င်းငျးတို့ ၃ ဦးသညျ …. CDM ပွုလုပျရနျ …. လှုံ့ဆျောခွငျး …. CRPH အားထောကျခံခွငျး ….ဆူပူအုံကွှမှုမြား ဖွဈရနျ ….အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားဖွဈရနျ …. လှုံဆျောခွငျး … နိုငျငံတျော ….အကွီးအကဲမြားအား …. စျောကား …..ပုတျခတျခွငျး ….. တို့ကွောငျ့ …..၎င်းငျးတို့ ၃ ဦးအား …. ဥပဒအေရ ….ထိရောကျစှာ …. အရေးယူသှားမညျ ….. ယငျးအပွငျ …. မိသားစုပိုငျ …. စီးပှားရေး … လုပျငနျးမြားအား ….နိုငျငံတျောပိုငျအဖွဈ …. ခြိတျပိတျ ….သိမျးဆညျး …. သှားမညျ …. ” လို့ Facebook ပျေါတှငျ ရေးသားတာ မွငျတှေ့ နရေပမေယျ့ အတညျပွု လို့တော့ မရသေးပါဘူး ပရိသတျကွီးရေ….
မကြောက်မရွံ့ပြည်သူဘက်ကနေရပ်တည်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးပြန်လာရင် အရင်ကထက်ပိုပြီး ချစ်ကြရလိမ့်မယ်